प्लेस्टेशन The को डुअलसेन्स अब एप्पल स्टोर अनलाइनमा उपलब्ध छ आईफोन समाचार
आईओएस १.14.5..5 को रिलिजको साथ, एप्पलले PS11.3 र Xbox श्रृंखला X नियन्त्रकहरू दुबै आईप्याड र आईफोन र एप्पल टिभीमा आधिकारिक समर्थन थप्यो, साथै म्याकसँग यसको सम्बन्धित अद्यावधिक (११.)) सहित, ताकि यो कुराको कुरा हो। यो भन्दा पहिले समय एप्पल स्टोर मा आइपुग्नेछ।
कुनै चाँडो गरेको भन्दा छिटो भनियो। एप्पलले एप्पल स्टोर अनलाइनमा प्लेस्टेशन of को डुअलसेन्स बिक्रीमा राखेको छ, एक कन्ट्रोलर हामीसँग सोनी directly।।।।। बाट सिधै किनेको जस्तै यसको मूल्य छ। यो लेख प्रकाशित गरेको समयमा, यो अझै स्पेन वा मेक्सिकोमा एप्पल अनलाइन स्टोरमा उपलब्ध छैन, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को वेबसाइट मा.
आईओएस १.14.5..XNUMX को साथ नेटिभ संगत हुनु, एप्पल आर्केडमा उपलब्ध सबै खेलहरू जुन कन्ट्रोलर उपयुक्त छ, प्लेस्टेशन the को डुअलसेन्ससँग उपयुक्त छ। यसका साथै यसले हामीलाई PS रिमोट प्ले अनुप्रयोग मार्फत हाम्रो आईफोन वा आईप्याडबाट टाढाबाट पनि प्ले गर्न अनुमति दिन्छ। यो रिमोट यूएसबी-सी पोर्ट मार्फत चार्ज गरिएको छ, केबल जुन बाकस सामग्रीमा समावेश छैन।
सोनीले भर्खरै घोषणा गर्‍यो कि यसले डुअलसेन्स नियन्त्रकको लागि दुई नयाँ रंगहरू सुरू गर्दैछ: लौकिक रातो y मध्यरात कालोयद्यपि यी हाल एप्पल स्टोरमा उपलब्ध छैनन्, तर अमेजन समान मूल्यको लागि: $। ..69,99 ((कम्तिमा संयुक्त राज्यमा)।
अहिले एप्पल Xbox श्रृंखला X नियन्त्रक बेच्दैन, तर यो समावेश गर्नु अघि यो समयको कुरा हुनेछ, किनकि आईओएस १.14.5..11.3 र म्याकोस ११..XNUMX ले सोनीको डुअलसेन्सका लागि मात्र नभई माइक्रोसफ्टको एक्सबक्स सीरीज एक्समा समावेशी नियन्त्रकको लागि नेटिभ समर्थन प्रदान गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » प्लेस्टेशन The को डुअलसेन्स अब एप्पल स्टोर अनलाइनमा उपलब्ध छ
एप्पलले सुझाव दिन्छ कि एपिक मुद्दामा माइक्रोसफ्टको हात छ